I-Redmi 6 kunye neRedmi 6A ifumana iPie ye-Android ngokusemthethweni | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Ukuhlaziywa kweRedmi 6 kunye neRedmi 6A kwiPie yePie
I-Redmi 6 kunye neRedmi 6A kudala ikho zaziswa ngokusesikweni eSpain. Kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo, uphawu lwaseTshayina lwatyhila ukuba yeyiphi kwiifowuni zayo eya kuba nakho ukufikelela kuhlaziyo kwi-Android Pie, uluhlu apho iimodeli zazingekho. Sisigqibo esivelise impikiswano enkulu kunye noqhanqalazo lwabasebenzisi. Yintoni eyenze uXiaomi watshintsha ingqondo.
Ngoku Uhlaziyo lwePie lwe-Android lukhutshiwe kwezi Redmi 6 kunye neRedmi 6A. Ke abasebenzisi abanezi fowuni kungekudala baya kuba nale nguqulo yenkqubo yokusebenza ngokusemthethweni. Oluya kuba loluphi uhlaziyo lokugqibela olukhulu olufunyenwe zezi zixhobo zimbini.
Sele iqalile ukumiliselwa kwilizwe jikelele. Kulindelwe ke ukuba kwiintsuku ezimbalwa ezizayo iya kwanda iye kwiimarike ezintsha kwihlabathi liphela. Kananjalo abasebenzisi baseSpain banazo ezi Redmi 6 kunye neRedmi 6A kufanele ukuba bafikelele kuyo kungekudala.
Uhlaziyo sele lufikile ngePie ye-Android 9 kwaye ikwabandakanya ezinye izinto ezininzi. Kwelinye icala, sele sinayo i-MIUI 10 kwezi fowuni zimbini, ukongeza ekubeni nesiqwengana sokhuseleko sikaJulayi 2019. Kuyaqinisekiswa ukuba olu hlaziyo inobunzima obupheleleyo obuyi-1,3 GB. Ke kubalulekile ukuba nendawo.
Iindaba ezimnandi zabasebenzisi abasebenzisa ezi Redmi 6 kunye neRedmi 6A, apho kwiinyanga nje ezimbalwa ezidlulileyo kubonakala ngathi bazokungafikeleli kwi-Android Pie, emva kwesigqibo sophawu. Izikhalazo ezininzi ezivela kubasebenzisi, ziimodeli ezimbini ezaziwa kakhulu kwikhathalogu yazo, zincedile ukutshintsha uluvo lomenzi.
Ke ngoko, abasebenzisi baseSpain ngezi Redmi 6 kunye neRedmi 6A baya kuba nakho ukufikelela kwiPie ye-Android kwiintsuku nje ezimbalwa. Inguqulelo ezinzileyo yenkqubo yokusebenza, ekufuneka ifike ngeentsuku ezimbalwa. Yaziswa nge-OTA, ke uya kusifumana isaziso xa sifumaneka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Ukuhlaziywa kweRedmi 6 kunye neRedmi 6A kwiPie yePie
I-LG V60 ThinQ iya kufika ngescreen esikabini
I-Galaxy Note 10 + 5G ithweswe isithsaba njengeyona khamera intle